Hlala kufutshane noGcino lweeNkcukacha »IYunivesithi yaseHodges
tag: Hlala kufutshane Yiya kude
IHodges Alumnus ifumana ibhaso likaSihlalo weNaples Chamber
Ndiyakuvuyela, uDave Weston! IHodges Alumnus ifumana iBhaso likaSihlalo weNkundla yaseNaples uDave Weston, igosa eliyintloko lokusebenza eNaples Lumber & Supply, ngumamkeli we-2019 weBhaso likaSihlalo weNkundla yaseNaples. UWeston uzukiswa ngokuzinikela kwakhe ekuphuculeni uluntu kunye nenkxaso eqhubekayo yegumbi. Uya kwamkelwa kwigumbi [...]	Funda Okuninzi
IMvana inyuselwe kwiiNkonzo zezeMali zabafundi ze-AVP
Ubomi bekhampasi, IFakhalthi kunye nabasebenzi
Siyavuyisana noKwazisa, uNowa! UNowa Lamb Ukhuthazwe waba liSekela Mongameli weeNkonzo zezeMali zabafundi kwiYunivesithi yaseHodges. Kule ndawo, uNowa uyalela yonke imisebenzi yeeNkonzo zezeMali zabafundi, kubandakanya noncedo lwezezimali, iinkonzo zomkhosi, ukusebenza ngokuncedisayo kunye nokufunyanwa kweakhawunti. Ngaphambi kokunyuselwa kwakhe, wayengumlawuli weeNkonzo zeeAkhawunti zabafundi kunye nokuSebenza okuNcedisayo [...]	Funda Okuninzi
Ubomi bekhampasi, Zikolo
Iqela elilawulayo leYunivesithi yaseHodges libhiyozela uMbutho woSihlalo oBomvu (LR) uTeresa Araque, ukuthengisa kwe-AVP / iPIO; UGqr John Meyer, uMongameli; U-Erica Vogt, i-VP yoLawulo yeMisebenzi yoLawulo; UTracey Lanham, uMlawuli oDibeneyo, iSikolo seTekhnoloji yeFisher; kunye noGqirha Marie Collins, uVP oPhezulu weMicimbi yezeMfundo. Ngokuka-sitwithme.org, umbutho woSihlalo oBomvu ukwabizwa ngokuba yi-Hlala no [...]	Funda Okuninzi
UJoe Turner iNtloko yeNethiwekhi yeAlumni eNtsha
Wamkelekile, uJoe Turner! Sonwabile ukuba nawe. I-Turner ebizwa ngokuba yiNtengiso ePhakamileyo kunye neAlumni Outreach yoMdali kwiYunivesithi yaseHodges ngo-Epreli 10, 2019 -NAPLES / FORT MYERS, i-FLA-uJoe Turner ubuyile kwiYunivesithi yaseHodges njengoNtengiso oMkhulu kunye neAlumni Outreach uMdali woMxholo. Kwesi sikhundla, unoxanduva lokongamela amanyathelo okuqala obudlelane beyunivesithi, ukongeza ekudaleni […]
Ndiyakuvuyela abafundi be-EMS
Abafundi beHodges EMS bathatha indawo yokuqala! Abafundi abasuka kwinkqubo yeYunivesithi yaseHodges yeeNkonzo zoNyango oluNgxamisekileyo bakhuphisana kwi-Panther EMS Challenge elesithandathu yonyaka eLake Worth, e-FLA kule mpelaveki iphelileyo. Lo msitho ububanjwe yiPalm Beach State College. Amaqela avela kwilizwe lonke agwetywa ngeendlela ezahlukeneyo zongxamiseko. Ngaphandle kwamaqela e-1 a [...]	Funda Okuninzi